Khabiirka Sare Guillem Balague Oo Shaaciyay Kooxda Ugu Cad-cad Inay Hanto Xagaagan Europa League %
Khabiirka reer Spain ee ka tirsan Shabakada Sky Sport, ninka lagu magacaabo Guillem Balague, ayaa wuxuu sharaxay sababta ay Atletico Madrid ugu cad-cadahay inay ku guuleysto tartanka Europa League, dhigeeda Arsenal oo la aaminsan yahay inay ku ceriirin karto.
Labadaan kooxood ayaa waxay kala badbaadeen isku aadka wareega Sideed dhamaadka tartanka, iyadoona kooxda reer Spain ay ku aaday Sporting Lisbon halka Arsenal ay ku beegantay naadiga kubada cagta ee CSKA Moscow.
Kulamada ay kala dheeli doonan labadaan kooxood ayaa waxay dhici doonaa maalin Khamiis ah oo ay Taariikhdu ku beegan tahay 5-ta bisha 4aad ee April sanadka 2018, waxaana lugta koowaad lagu horumari doonaa garoomada Arsenal iyo Atletico.
Guillem Balague oo la weydiiyay mida Arsenal iyo Atletico ugu cad hanashada EPL ayaa wuxuu ku jawaabay: “Aniga ahaan Atletico Madrid – Arsenal waxay ku guul dareystay inay kusoo rogaan qaabka ay udheelaan guusha iyo maskax ahaan.
“Hanaanka daafacooda ma ahan mid si fiican loogu soo saliideeyo kulamada waa weyn – Laakiin Atletico Madrid, waa kuwa sidaas soo hela, waxayna yihiin kuwa mar walba soo wada tashta,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Inay Oblak haystaan oo ah Goolhaye fiican – Inuu Gimenez [mid kamid ah daafacyada ugu fiican dunida aniga ahaan] oo uu wehlinayo Godin, oo lagu daray afarta khad dhexe ee [Saul, Koke, Thomas iyo Gabi] ayaa ka dhigeysa koox isku abaabulan.
“Griezmann iyo Costa oo ah gooldhaliyaan fiican ayaa waxay ka dhigeysaa mar kale inay noqdaan kooxda ugu fiican koobkaan sidaas darteeda waan arki doonaa waxa dhaca,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Khabiirka reer Spain ee Guillem Balague.
ArsenalAthletico MadridEuropa LeagueGuillem Balague